बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? यसरी भयो फोटो भाइरल- – Paluwa Khabar
बिहिबार , कार्तिक ४, २०७८
बुद्ध एयरको जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए ? यसरी भयो फोटो भाइरल-
अषोज १२, २०७८ मंगलबार 44
काठमाडौं – काठमाडौंबाट विराटनगरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज अवतरण हुन नसकेर पुनः काठमाडौं फर्किइयो । झण्डै दुई घण्टा आकाशमा ‘होल्ड’ गरेपछि जहाज काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षित अवतरण गराइएको छ ।
उक्त जहाज क्याप्टेन एजी शेर्पाले उडाएका थिए । जहाजमा चालक दलका सदस्यसहित ७७ यात्रु सवार थिए । सुरक्षित अवतरण गरेपछि क्याप्टेन शेर्पासहितको टोलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारी र प्रहरीले स्वागत गरेका छन् ।जहाजबाट ओर्लिएका क्याप्टेन शेर्पालाई अंकमाल गर्दै सबैको शुभेक्षा प्रकट गरेका छन् ।
शेर्पाको साहसिक, धैर्यवान र कुशल कार्यले नै ७७ जनाको सुरक्षित फर्किएका हुन् ।तर, सोमबार साँझबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल शाह, बुद्ध एयरका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासहित बुद्ध एयरका कर्मचारीसहितको एउटा तस्वीर भाइरल भएको छ । के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल त्यो जहाजमा थिए ?
फेसबुकको एउटा ग्रुपमा प्रेम कोइराला लेख्छन्, ‘काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा सवार राजारानीसहित सम्पूर्णको जीवन सुरक्षित रह्यो, राजारानीसँगै रहेकाले प्रायः व्यक्तिहरूलाई ठुक्क थियो, जहाँ राजा छन्, त्यहाँ भगवान रहन्छन् । जय देश जय नरेश ।’
फेसबुकमै पार्वती थापाले लेखेकी छिन्, ‘साहसी क्याप्टेन आङगेलु शर्पाज्यू नमन! आज बुद्ध एयरको जहाजलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएर ७७ जनाको ज्यान बचाउने भगवान!’ उनले पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तस्वीर पोस्ट गरेकी छिन् ।फेसबुकमा अर्को पोस्ट छ, विशाल राजभण्डारीको ।
उनी लेख्छन्, ‘जहाँ राजारानी हुन्छ त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ भन्ने सही सावित भयो । आजको बुद्ध एयरमा राजारानी पनि सवार थिए, त्यही भएर भगवान श्री पशुपतिनाथको कृपाले दुर्घटना हुनुबाट जोगियो ।’दुई घण्टादेखि काठमाडौंको आकाशमा होल्ड भएको जहाज सकुशल अवतरण भयो ।
त्यसपछि सबै यात्रु गन्तव्यतिर लागे । कोही भिआइपी छन् कि भन्ने चासो थियो । किनभने दिउसोको कार्यक्रमका लागि राजनीतिक दलका नेताहरू बिहानै विराटनगर जाने गरेका छन् ।अब कुरा गरौं भाइरल भएको तस्वीरको । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमलसँग क्याप्टेन शेर्पाले फोटो खिचेका रहेछन् ।
तर, सोमबार होइन । भाइरल भइरहेकामध्ये एक तस्वीरमा सन् २०१० अक्टुबर ११ तारिख उल्लेख छ ।अर्को तस्वीर सन् २०१२ तिरको भन्ने बुझिएको छ । त्यस कारण पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमलको उक्त तस्वीर सोमबारको नभएको पुष्टि भएको छ ।
कहाँ छन् ज्ञानेन्द्र ?फोटो भाइरल भएपछि पूर्वराजाका सञ्चार सचिव फणिराज पाठकलाई सम्पर्क गर्दा पाठकले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र काठमाडौंमै रहेको बताए । साथै ज्ञानेन्द्र उक्त जहाजमा नरहेको पनि पुष्टि गरे ।त्यसैले सोमबार भाइरल भइरहेको तस्वीर पूरानो हो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
यद्यपि, नेपालमा राजतन्त्र गए पनि ज्ञानेन्द्र पक्षधर सानो जमात अहिले पनि छ । ज्ञानेन्द्रका अनेक तस्वीर भाइरल बनाउने काम सोही समूहको हो ।यसअघि, जहाज विराटनगरमा ल्याण्ड हुन नसकेर काठमाडौं फर्किएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हाइअलर्ट गरिएको थियो । विमान फोर्स ल्याण्डका लागि एम्बुलेन्स दमकल विमानस्थलमा राखिएको थियो ।
Prevप्रेमीको ८७ वर्षीय बुवा पालेर बसेकी लक्ष्मीको अधुरै भयो विवाह गर्ने सपना, साउदीवाट प्रदीप नआउँदै आफै अ’स्ताइन्
Nextसबै विद्यालय बन्द गर्न सरकारको नि’ र्देशन, यति गते बाट बन्द हुदै विद्यालय?
भर्खरै DCCMC को बैठक सकियो, विद्यालय यति दिन बन्द गर्ने सरकारको घोषणा
मुकेश चाैरसियाकाे हत्यारालाई कारबाहि गर्न प्रचण्डकाे माग
दशै पहिराे पिडितका लागि दशा बन्दै
बिश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख सेल्फ क्वारेन्टाईनमा
एक्कासी फेरी लकडाउन हुने मिती तोकियो, यति गतेबाट पुन देशमा लकडाउन सुरू हुँदै (541)
शिक्षकले राजनीति गरे जागिरै चट् पार्ने गरि यस्तो बन्यो कानून , पढ्नुहोस कानुन? (352)
आजदेखि सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि, कस्को कति तलब वृद्धि ? (345)
माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो , सोह्र सांसद एमालेमा प्रवेश ! नामावली सहित (344)
मास्टर माइन्ड प्रचण्डलाई देउवाले दिए सरकारको सबै जिम्मा, माओवादीबाट नयाँ राष्ट्रपति को ? (333)
भर्खरै बिमान दु’ र्घटना हुँदा प्रधानमन्त्री सहित ११ जनाको मु’ त्यु , मनमा माया भए RIP लेख्नुहोला (332)
अब बालबालिकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ शैक्षिक भत्ता, यसरी प्राप्त गर्नुहोस्? (284)
पर्यटनमन्त्रीमा प्रेम आले (277)
खानेपानी प्रमुखलाई ना;गै पारी घुमाउँदै हेर्नुहोस यसकारण !
हे भगवान यो कस्तो पि’डा दियौ ? एकै परिवारका ६ जनाको दा’हसंस्कार
१८ वर्षीया किशोरी सुजितासँगै तीन जना युवक कोठाभित्र समा’तिए
बा’ढी प’हिराे : ८८ को मृ’त्यु पुष्टि, ३० जना बे’पत्ता
झापाका नक्क’ली डिएसपी निलम भट्टराई सुर्खेतमा प’क्राउ
यो साता को चर्चित
१.	नेपाल प्रहरीमा भर्ना खुल्यो, आवेदन समय कहिलेसम्म दिइसक्नुपर्ने ! (दरखास्त फारम र प्रवेश पत्रसहित)हेर्नुहोस (83)
२.	आधा घण्टा अघि यस्तो तस्बिर राखेकी डा. दीपाको भयो दु’खद् नि’धन (भिडियो हेर्नुस्) (82)
३.	भारतिय कोच भन्छन् : ‘साफ च्याम्पियनसिप नेपालले नै जित्छ’ (57)
४.	विप्लवका दाई वीरजङ्गको मृ’त्यु हार्दिक श्रदा’न्जलि (56)
५.	यस्तो छ तपाईको शुक्रबारको भाग्य! असोज २९ गतेको राशिफल हेर्नुहोस् (52)
६.	श्रीमानले सुटुक्क श्रीमतीको ला’स ज’लाउन लगाएपछि,यसरी राम धु’लाई भेटे (भिडियो हेर्नुस्)। (51)
७.	उपरखुट्टी राखेर कार्यालयभित्रै कै टेलबमा मस्त निन्द्रामा सुतेका सरकारी कर्मचारीलाई के भन्ने ? (50)
८.	बि’यरका बोतलले हा’न्दा सात प्रहरी घा’इते,अबस्था ग’म्भीर (49)
© 2021 Paluwa Khabar
Site by :